Mizarà ho toy ny sary: ​​Asongadino, kitiho ary zarao ny lahatsoratra | Martech Zone
Mizarà ho toy ny sary: ​​Asongadino, kitiho ary zarao ny lahatsoratrao
Zoma, Aprily 19, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tsy maintsy nanao a fanoratana boky amin'ny Beth Hayden ao amin'ny Social Media Marketing World, mpanoratra an'ny Pinfluence: Ny torolàlana feno amin'ny marketing ny orinasanao miaraka amin'ny Pinterest.
Ny iray amin'ireo fitaovana zarain'i Beth ao amin'ny bokiny izay tena tsotra nefa tena tsara dia antsoina Mizarà ho sary. Ho an'ny vola vitsivitsy dia azonao atao ny misintona tsoratadidy ao amin'ny bara fanaovan-tranonkala ary avy eo mamadika ny teny nalaina ho sary azo zaraina. Mora maty tampoka miaraka amina endri-javatra vitsy dia vitsy… fa izany no mahomby!
Indraindray ao amin'ny bilaogiko aho rehefa te-handray fakan-teny ary asongadiko ao anatin'ny vatan'ilay lahatsoratra. Ity dia fomba tsara iray hanaovana an'izany - tsy hoe manome ahy sary azoko hampiasa soratra hafa miaraka amin'ny fanatsarana ny fikarohana sary, fa zavatra tena miavaka eo afovoan'ny lahatsoratra ao amin'ny bilaogy.
Raha mila zavatra somary matanjaka kokoa ianao, izay ahafahanao manampy sary ao aorianao ary ampanjifaina bebe kokoa ny vokatrao, dia mitanisa ihany koa i Beth PicMonkey ho fitaovana fanovana sary tsara azonao atao amboarina amin'ny lahatsoratra.
Tags: beth haydenpicmonkeypinfluencezarao toy ny sary